Natiijooyinka cayaaraha Premier League - BBC News Somali
Natiijooyinka cayaaraha Premier League
28 Nofembar 2016
Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska waxaa todonaadkan la cayaaray kulammadii 13-aad waxaa dhacay cayaaro xiiso leh oo si wayn la isugu riiqmay.
Sabti 26 November 2016
Image caption Pedro ayaa cayaarta ka dhigay 1-1
Chelsea ayaa 7 kulan oo is xiga oo ay badisay waxay xagsatay hogaanka horyaalka ka dib markii 2-1 ay ku garaacday kooxda Tottenham ee ay isku magaalada London ka dhisan yihiin oo ay ku marti galisay garoonkeedda Stamford Birdge ee galbeedka London garoonkaas oo ay Tottenham ku badiso waxaa ugu dambeysay February 1990-kii.
Inkastoo Tottenham uu siiyey hogaanka cayaarta Christian Eriksen haddana laba gool oo ay kala dhaliyeen lix daqiiqo gudahaood qaybta labaad ee cayaarta ayaa guusha siiyey Chelsea.
Liverpool waxay si dirqi ah uga badisay kooxda Sunderland oo ka cararaysa inay Premier League-ga ka baxdo iyadoo cayaaryahanadda Sunderland ay ku soo talo galeen daafac adag kaasi darbi adag oo ay u dhigeen Liverpool uu burbruay daqiiqaddii 75-aad ka dib gool si xaraggo leh uu goosha ugu hubsaday weeraryahanka Divock Origi oo cayaarta badal ku soo galay.
Laakiin xaalku wuxuu ku sii xumaaday Sunderland oo geesinnimo muujiyey daqiiqaddii 90-aad ka dib markii ay isku keeneen gool ku laad taasi oo uu dhaliyey Jemes Milner oo natiijadda cyaarta ka dhigay 2-0.
Liverpool waxay hadda ku jirtaa 11 kulan oo aan dhinaceedda dhulka laga dhigin Premier League-ga.
Kulamada kale ee sabtidii dhacay waxay ahaayeen
Burnley vs Manchester City 1-2
Manchester City oo marti ahayd ayaa 2 gool ugu badashay kooxda Burnley oo la hormartay gool, kulankaas oo ka dhacay garoonka Truf Moor, waxaanna City hadda ay ku jirtaa kaalinta 3-aad iyadoo ay isku dhibco yihiin Liverpool balse uga dambeysa farqi xagga goolasha ah.
Hull vs West Bromwich 1-1
Hull waxay barbardhac 1-1 la gashay kooxda West Bromwich oo ay ku qaabishay gurigeeda KCOM Stadium.
Leicester City vs Middlesbrough 2-2
Leicester City oo horyaalka daafacanaysa balse natiijooyinkeedda Premier League-ga ay liitaan waxay garoonkeedda King Power Stadium laba goor xagga dambe ka keentay goolal lagala hormaray iyadoo ciyaartaas ku dhmaatay 2-2.
Swansea vs Crystal Palace 5-4
Mid ka mid ah kulamaddii ugu xiisaha badnaa ayaa dhexmaray kooxaha Swansea oo gurigeedda Liberty Stadium kula cayaartay kooxda Crystal Palace waxaa kulankaasi muddo 10 daqiiqo ah la iska dhaliyey 4 gool iyadoo , ciyaaryahan Fernando Llorente oo badal ku soo galay ayaa sadex daqiiqo oo qura wuxuu ku dhaliyey 2 gool isagoo kooxdiisa siiyey guusha kulankaas.
Image caption Sanchez ayaa Arsenal u dhaliyey 2 gool kulankaas
Arsenal waxay soo afjartay sadex kulan oo xiga oo ay barbardhac gashay ka dib markii ay 3 gool ay ka dhalisay kooxda martida u ahayd ee Bournemouth oo ay ku qaabishay garoonka Emirates Stadium ee waqooyiga London.
Arsenal waxaa hogaanka cayaarta siiyey ciyaaryahan Alexis Sanchez daqiiqadii 12-aad, waxaase gool ku laad ay heleen Bournemouth cayaarta 1-1 ka dhigay weeryahan Wilson.
Laakiin Theo Walcott ayaa daqiiqadii 55-aad gool madaxa uu ku dhaliyey wuxuu mar kale hogaanka siiyey Arsenal, waxaase Bournemouth quusatay daqiiqaddii 90-aad oo Sanchez uu dhaliyey goolkiisii labaad ee cayaarta.
Lahaanshaha sawirka Reuters & Getty Images
Image caption Garsoore John Moss oo Jose Mourinho garoonka ka saaray
Manchester United waxay 1-1 kula gashay kooxda West Ham oo ay kula kulantay garoonka Old Trafford, iyadoo laba daqiiqo oo qura cayaarta oo socota uu gool dhaliye Sakho uu hogaanka cayaarta siiyey kooxda maritada ahayd ee West Ham.
Laakiin weeraryahanka reer Sweden Zlatan Ibrahimovic uu kooxdiisa rajada u soo celiyey daqiiqadii 21-aad isagoo 1-1 ka dhigay cyaarta.
Man United waxaa uga darnaa in cyaarta barbardhac lagu qabto iyado tababare Jose Mourinho lagu ganaaxay innuu ka baxo goobta loo qoondeeyey tababarayaasha uunna u baxo xagga sare garoonka oo uu taageerayaasha ka mid noqdo taasi oo timid ka dib markii isagoo ka caraysay kaarka jaalaha oo la siiyey cayaaryahan Pogba uu si xun u laaday caagad biyo ku jireen iyadoo markaas garoose John Moss uu gacanta ugu baaqay Jose Mourinho in uu taageerayaasha dhex fariisto.
Man United waxay afar mar oo xiga gurigeedda ku gashay barbardhac taasi oo ay ugu dambaysay 1990-kii.
Kuanka kale ee Axadii dhacay wuxuu dhexmaray kooxaha Southampton oo garoonkeedda St Mary's Stadium ku soo dhaweysay kooxda Everton iyadoo 1-0 ay ku badisay kooxda ka dhisan Koonfurta England ee martida loo ahaa.